John Barnes Oo Kala Hadlaya Kalidou Koulibaly Heshiiska Liverpool
HomeHoryaalka IngiriiskaJohn Barnes oo kala hadlaya Kalidou Koulibaly heshiiska Liverpool
December 1, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Wararka Ciyaaraha 0
Halyeeyga Liverpool John Barnes ayaa aaminsan in Reds aysan wax dhibaato ah ku qabin inay ku qanciso Kalidou Koulibaly inuu u dhaqaaqo Anfield kana tago Napoli .
Iyadoo Jurgen Klopp uu isku dayayo inuu aritan wajaho xilliyada ciidda, Koulibaly ayaa loo arkaa inuu yahay xalka ugu macquulsan suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Kooxaha kale ee Premier League ka wada dhisan ee Manchester City iyo Manchester United ayaa sidoo kale lagu qiimeeyaa xiisaha Koulibaly, laakiin Barnes ayaa kalsooni ku qaba in 29 jirkaan uu ku biiri karo Liverpool isla markaana uu difaaca kala ciyaari doono Virgil van Dijk .
Barnes oo la hadlaya BonusCodeBets , ayaa yidhi: “Haddii Koulibaly yimaado, waa ciyaartoy ka garab ciyaari kara Van Dijk marka uu soo laabto sidaa darteed way fududaan lahayd in lagala hadlo Koulibaly inuu ku biiro Liverpool, si ka duwan ciyaartoy kale oo waaweyn waayo isagu waa shaqsi haddii uu yimaado toos ula qabsan kara kooxda koobaad.
Marka laga soo tago Koulibaly, uma maleynayo inuu jiro qof banaanka jooga oo Liverpool ay raadineyso inay hesho bisha Janaayo. ”
Koulibaly ayaa 12 kulan u saftay kooxda Napoli ololihii 2020-21 waxaana qandaraaskiisa kooxda uu dhacayaa xagaaga 2023.